काठमाडौं, १५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले केही दिनमा किड्नी फेर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । विहीबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षणमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘केही दिनमा किड्नी फेर्छु । पाँच दिन आराम गर्छु, छैटौं दिनमा काममा फर्कन्छु । अझै १०/१५ वर्ष मलाई केही हुन्न ।’
उनले आफू संसदबाट भागेको नभई व्यस्त भएर नगएको तर्क गरे । जन्मदिनको प्रसंगमा कांग्रेसले केकमा राष्ट्रवाद खोजेको उनको तर्क थियो ।
यस्तो छ ओलीको मन्तव्य
काकाकुल बनेका जनताको घरमा धारो खस्यो । खुसी भएर महिला दिदी बहिनी नाँचेकोमा चिन्ता । मेरो जन्मथलोमा धेरै वर्षपछि म पुगेँ । आफ्नो गाउँमा जन्मिएको मान्छे प्रधानमन्त्री बनेर आउँदैछ भनेपछि …. । म पुग्दा बाटो लिएर गएँ, बिजुली लिएर गएँ । बैंकको शाखा लिएर गएँ । मान्छे खुसी भए धुमधामसँग । त्यहाँ पनि बाजा बजाए, गाए, नाँचे । उधुम मच्चाए । त्यो दुर्गम ठाउँमा दशौं हजार मानिसले उत्सव मनाए । पत्रकारहरु धुरुधुरु रोए । मान्छे खुसी भएर कसले केक ल्यायो, कसैले केक ल्याए, कसैले खादा ल्याए । कसैले के गरे । होइन म नेवारको ज्वाईं । ओइला र ऊ मात्रै खान्छु भन्न त भएन नि ।
अण्डा र रक्सी पनि ल्याएका थिए
केक ल्याएर, मान्छेले के ल्याए । काटे, खाए । केकमा प्रायः के गर्दारहेछन्, मैले हेर्दा पनि हेरिनँ । कतिवटा केक ल्याए, कतिवटा अगाडि देखाए । मैले छोइदिएँ । लगे । फेरि अर्को केक ल्याए । फेरि छोइदिएँ । फेरि लगे । फलफूल सलफूलका दानाहरु झाँकी ल्याए । त्यो छोइदिएँ, लगे । अण्डा पनि ल्याइरहेका थिए झाँकी । त्यो पनि छोइदिएँ । माछाको पनि ल्याएका थिए । त्यो पनि छोइदिएँ लगे । रक्सीको पनि ल्याएका थिए । छोइदिएँ । लगे । अब त्यो रक्सीको बनाउनेलाई सोध्नुपर्‍यो नि । अण्डाको कति पर्‍यो बनाउनेलाई सोध्नुपर्‍यो नि । त्यहाँ बाटो लगेकोमा, बैंक लगेकोमा, पानी लगेकोमा धारा लगेको बिजुली लगेकोमा तिनीहरु किन खुसी भए ? सोध्न जानु पर्‍यो नि त्यहाँ । त्यहाँ त उधुमको बेला थियो । उत्सव थियो । काठमाडौंमा रुवाबासी ।
मनपरेको चिजको आकार आकृति बनाउँछ । त्यो केक … । मन परेको चिजको नक्सा बनाउने । मेरो अनुहारको केक बनाउँछन्, काट्छन् । म काटिएको छैन । त्यस्तो झण्डा बनाउने, फोटो बनाउने, तपाईंहरुले युट्युबतिर हेर्नुभयो भने मोदीको फोटो बनाएको, ओबाको फोटो बनाएको, केक काटेको देख्नुहुन्छ । त्यहाँ चाहिँ फोटो देख्नुभयो होला काटेको देख्नु भएन होला । काटेकै छैन केक । त्यसो भएर । यस्तो कुराहरुमा, बेकारका कुराहरुमा अल्झिनु हाम्रो संस्कृति अधपतन भयो भनेर रुवाबासी गर्नपर्ने अवस्था छैन । जनताले खुसी मनाएको कुरा हो त्यो । मैले केक लिएर गएको त होइन त । जनताले कहाँ कहाँबाट ल्याए ।
खादा ल्याए । के ल्याए सबैचिज ल्याए । त्यहाँ जनता खुसी भए । थरीथरीका बाजाहरु । विभिन्न खालका झाँकीहरु । मैले नाँच भनेको त थिइनँ नि । गाउँगाउँबाट आएका मानिसहरु, कहाँ कहाँबाट आएका । नाँचेका । त्यसकारण यस्ता कुराहरुमा अल्झिरहनुपर्ने म ठान्दिनँ । बेकारको ऊ गर्नु पर्दैन ।
अरुको मामला भएको भए सायद चर्चा हुँदैनथियो । मेरो मामला भएको हुनाले बढी चर्चा भयो ।
बन्दुकको मोहरी धेरै सोझ्याउनुपर्ने पनि आवश्यकता छैन ।
कांग्रेसको केक राष्ट्रवाद
कंग्रेसले । भारतले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी लगाउँदा, ग्याँस नहुँदा, चुलो नबल्दा आफैं भोकै पर्दा पनि चुइक्क बोल्न नसक्ने, अहिले केकमा राष्ट्रवाद कांग्रेसको । उफ्रिएर हिंडेको छ । केक राष्ट्रवाद यो । देशको कुरा परेको बेला चुप लाग्ने । नाकाबन्दी भएको बेला बोल्न नसक्ने । नाकाबन्दी बेठिक भन्न नसक्ने । नाकाबन्दी भन्ने शब्दै उच्चाहरण गर्न नसक्नेहरु अहिले केक राष्ट्रवादी । केक समात्ने । केकमा देख्ने राष्ट्रवाद । यो कांग्रेसको बेकारको तमासा हो । यसरी कांग्रेसले राजनीति गर्छु भन्ने ठानेको छ भने बेकारको कुरा हो ।
अझ म एकदुई दिन संसद गइन । संसदबाट भाग्न भएन प्रधानमन्त्री । संसदबाट भाग्न भएन । बोल्न खोज्दाखेरी हल्ला गरेर बोल्न नदिने संसदमा । अनि भाग्यो भनेर फेरि भन्ने । संसदबाट भाग्ने होइन । संसदमा दुई तिहाई ल्याएको संसदको नेता हुँ म । भाग्ने कुरा आउँछ । नेपाली जनताले छानेर सरकार चलाउनका लागि भनेको । नेकपाले छानेर सरकार चलाउनका लागि भनेको । प्रधानमन्त्री बनाएको । देशभरीका कार्यकर्ताको अपार विश्वास र स्नेह पाएको ।